Maxaa ka jira in Duullimaadyadii Puntland imaan jiray la joojiyay? – Puntland Post
Wasiir Ilyaas Cismaan Lugatoor
Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada dowladda Puntland, Ilyaas Cusmaan Lugatoor (Gabiley) oo la hadlay warbaahinta Puntland Post, ayaa beeniyay warar lagu qoray baraha bulshada oo sheegayay, in dhammaan duullimaadyadii imaan jiray Puntland la joojiyay, kadib markii ay saameyn ku yeesheen roobabka dabaylaha wata.
Sidoo kale, wuxuu xaqiijiyya in diyaaradda Ethiopian Airline oo Sabtida maanta Duullimaad ku imaan lahayd Garoowe, ay u baaqatay hakad yar oo gelinkii dambe ku yimid Duullimaadyadii Garoonka.
Wasiirka ayaa caddeeyay, in dhammaan jadwalkii Duullimaadyadii berri qorshaysana in ay yimaadaan Garoomada Puntland ,aysan wax caqabad ah ka jirin, haddii aysan xaalad kale soo kordhin, balse haddii xaalad kale soo kororto markaasi go’aan laga gaari doono.
Halkaan ka daawo wareysiga Wasiirka